Ukubambezeleka Kwe-imeyili ku-Outlook > UVielhuber David
Ukubambezeleka Kwe-imeyili ku-Outlook05
I-imeyili yokuxhumana phakathi kwe-asynchronous - ngaphandle kwazo zonke iziphrofetho zembubhiso ezungeze iSlack ne- Discord - indawo yokuxhumana evelele emkhakheni wezamabhizinisi emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwe- Inbox Zero evela kwaMerlin Mann, maningi amanye amasu okubhekana nezikhukhula zansuku zonke zama-imeyili, kufaka phakathi lokho okubizwa ngokuthi ukubambezeleka kwe-imeyili, okusho ukubambezeleka kokulethwa kwama-imeyili.
Uma ufuna ukuzikhulula isikhashana empilweni yansuku zonke, ukubambezeleka okuzenzakalelayo kwama-imeyili kuyanconywa. Uvele ucindezele izimpendulo ngokuzayo futhi ngasikhathi sinye unganciphisa ngamabomu isivinini sakho sokuphendula. Umsebenzi uphinde uqinisekise ukuthi ama-imeyili athunyelwe ngephutha kumakhasimende noma kubasi asengabuyiswa isikhathi esithile.
Kule phrojekthi, ngizokwethula izinhlobo ezintathu zokuthi ungakusebenzisa kanjani okufunayo. Ngokuhlukile kokuqala, sakha umthetho we-Outlook (esimweni se-Exchange server-side) (yawo wonke ama-akhawunti we-imeyili asetshenzisiwe):
Le nqubo ibambezela yonke imilayezo ephumayo. Ngeshwa kuphela ibanga lenani lemizuzu engu-1-120 elingenzeka ngaleso sikhathi, ukuze ama-imeyili angabambezeleka ngaphezu kwamahora ama-2.
Uma ufuna ukunweba isikhathi futhi ube nokulawula okuningi, ungasebenzisa ukwanda kwe-Outlook ngombhalo ngamunye we- VBA . Ukuze wenze lokhu, vula umhleli we-macro (ALT + F11), dlulela kwimodyuli ye- "ThisOutlookSession" bese ufaka omunye wemibhalo elandelayo (izinguquko ziyasebenza ngaphandle kokulondolozwa okucacile nangaphandle kokuqalisa kabusha i-Outlook):
Kulesi sibonelo, wonke ama-imeyili ahanjiswa ngokuzenzakalela ngo-6: 00 ntambama.:
Isibonelo, uma ufuna ukubambezela isikhathi sokuthumela se-imeyili ngayinye ngamahora ayi-8, umbhalo olandelayo uyakwenza:
Futhi uma ufuna ukuthumela yonke i-imeyili ngezikhathi zamaKristu ekuseni ngosuku olulandelayo lokusebenza, ungasebenzisa okulandelayo:
Uma ufuna ukubuzwa ngokubambezeleka ngaphambi kokuthumela, ungakhombisa nengxoxo ngaphambi kokuthumela, lapho uzobuzwa khona ukuthi uyafuna ukubambezeleka noma cha. Futhi kuyasiza: ukuchofoza ku- "Khansela" kumisa ukuthunyelwa kwe-imeyili ngomzuzu wokugcina.
Ama-imeyili asevele ebambezelekile agcina ngokuzifaka ebhokisini lokuphuma le-akhawunti ye-imeyili efanele athunyelwe kuyo aze athunyelwe. Okubalulekile: Zithunyelwa kuphela lapho i-Outlook ivulekile. Uma ufuna ukukhipha lokhu lapho ezimweni ezihlukile, ubuyisela i-imeyili kokungakapheli, wenze kungasasebenzi umaki "Wokubambezeleka kokulethwa kuze kube" kuzici ze-imeyili ngezinketho> Ukubambezeleka kokulethwa bese uyithumela futhi.
Ukuze yonke imibhalo ye-VBA eshiwo ngenhla isebenze, ikhodi eku- "ThisOutlookSession" yenziwa imodyuli ehlukile, esayinwe ngamadijithi ye- VBA. Ukuze uvivinye imisebenzi okwamanje, unga (mhlawumbe isikhathi esifushane kuphela) uvumele wonke ama-macro ngaphansi kwe-Amasethingi> Isikhungo Sokuthembela> Amasethingi Esikhungo Sokuthembela ...> Izilungiselelo ze-Macro:
Uma ufuna ukuhlanganisa izinzuzo zokwahluka kokuqala (iseva-side dispatch) nokuhluka kwesibili (ukukhetha isikhathi samahhala), iBoomerang ye-Outlook nomsebenzi we- "Send Later" uyanconywa. Le nsizakalo inikeza ukubambezeleka kwama-imeyili ayi-10 ngenyanga futhi isebenza ngokuthembekile.